Ubuntu yatove nePPA yevatyairi veNVIDIA | Linux Vakapindwa muropa
Canonical Iyo ine vadziviriri vayo nevanozvidza, asi kana chimwe chinhu chisingakwanise kutadza kuzivikanwa, ndechekuti ivo vanoita nekukurumidza zvakanyanya mukuita zvinangwa zvavo, chimwe chinhu icho zvakare chiri humbowo nechinangwa che tangisa iyo PPA kuitira kuti vashandisi vemhando dzakasiyana dzeUbuntu vagare vaine yavo NVIDIA mifananidzo kadhi kadhi inovandudzwa. Nyaya yatinonyatsoziva kukosha kwayo kune vashandisi veiyi uye imwe distro, ndosaka yakagadzira kutarisisa kwakanyanya.
Zvakanaka, mazuva mashoma mushure mekuzvikurudzira, Ubuntu yatove nePPA yayo yevatyairi veNVIDIA, inonzi Graphics Drivers PPA. Mariri vashandisi vanowana iyo Dzazvino vhezheni dzevatyairi kubva kukambani ino, yakarongedzwa yeCanonical distro (chero hwekunaka hwatinoshandisa). Uye saka rimwe rematambudziko makuru kune vazhinji vashandisi veiyo huru yemahara inoshanda sisitimu, ruzivo uye kwete zvakanyanya, inogadziriswa.
Uchapupu hweizvi hunogona kuonekwa mukushinga kukuru kwakataurwa nharaunda yemushandisi yeUbuntu nezve mukana wekuve neiyi PPA ye NVIDIA nekukurumidza sezvakange zvataurwa, uye kunyangwe Edwin Smith (anoonekwa musoro wekuvandudzwa kweFeral Interactive, iyo pakati pezvimwe zvigadzirwa yagadzira iyo Shadow yeMordor mutambo wevhidhiyo) yaratidza kugamuchirwa kwayo. Nekudaro, zvese zviriko zvakagadzirira, uye kunyangwe iyo PPA iri nehunyanzvi yatove kushanda, vanogadzira Canonical vari kupedzisa kuita dzimwe nyaya, saka unofanirwa kungwarira.
Kuwedzera iyo PPA tinoita zvinotevera:
Uye isu tichakwanisa kutanga kuyedza iwo madhiraivha matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » vatyairi » Ubuntu yatove nePPA yevatyairi veNVIDIA
Zvinozorodza kuona kuti iyi nyaya, iyo yakonzera kukakavara kwakanyanya, iri kupedzisira yabatwa zvakanyanya ... Pamwe chokwadi chekuti mitambo yawana kukosha muLinux yakave nesimba, kunyangwe isina kukura kwakadai chiyero chaive chakanyatsodiwa.
"Nvidia Anokukanganisa" (Linus Torvalds)